Jidka Isku Xidha Addis Ababa & Harar Oo Xanniban Iyo Tirada Dhimashada Oo Sii Korodhay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaJidka Isku Xidha Addis Ababa & Harar Oo Xanniban Iyo Tirada Dhimashada Oo Sii Korodhay
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Jidka isku xidha magaalooyinka Addis Ababa iyo Harar ayaa la xidhay, waxaana lagu mashquulsan yahay xajiijinta cidda ay yihiin toban qof oo dhimasho ah iyo dhaawaca shan qof oo kale, kuwaas oo geeriyooday xilli ay u dabbaal-degayeen farxad aroos.
Degmada Gora Gutu ee ee gobolka Bariga Hararge ee deegaanka Oromiya ayaa waxa waddada iskugu soo baxay dad u dabbaal-degayey xaflad aroos, laakiin gaadhi noociisu yahay IZUZU oo xawaare dheer ku socday ayaa jiidhay, waxaana isla goobtii ku geeriyooday 10 ruux oo meydkooda cusbitaal la dhigay.
Shilkan naxdinta leh, waxa ay dhaawacyo culus kasoo gaadheen 5 qof oo kale oo dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan xaaladdooda.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa kusii jeeday guriga caruuska si ay ula soo damaashaadaan balse nasiibdaro masiibo ayaa dhexda ka heshay.
Booliska deegaanka Oromiya iyo federaalka ayaa si wada jir ah u raadinaya dirawalkii gaadhiga oo baxsaday, waxayna arintani sababtay in mudo saacado ah uu xidhnaado jidka laamiga ah ee bariga iyo galbeedka wadanka isku xidha.
AKHRISO: Xogta Shidaal Uu Maraykanku Ku Qarsaday Godad Ku Yaalla Dhulka Hoostiisa